myTuner Radio Pro, teerera redhiyo ne iPhone yako, mahara kwenguva shoma | IPhone nhau
myTuner Radio Pro, teerera redhiyo ne iPhone yako, mahara kwenguva shoma
Nezuro, zuva rekutanga regore, ndakakuzivisa iwe mafomu matatu atinogona kurodha mahara kwenguva yakati rebei, kuva ekutanga matatu ekushandisa evazhinji ayo kubva kuActualidad iPhone isu tichaenda kukuratidzira iwe kuti utore mukana wakasiyana kwakapihwa kwatinopihwa nevamwe nevakagadziri. Chimwe chezvinhu izvo vashandisi vazhinji vangangotadza pane iyo iPhone ndiwo mukana wekugona kuteerera chiteshi chedu cheredhiyo chatinofarira tisingashandise mwero wedata redu kana kuburikidza neWifi kubatana, sekunge kuti isu tinogona kuzviita kuburikidza nemazhinji maTerminal terminals, asi chiri chinhu icho Apple chisingazomboshandisa.
Kune vese avo vanoteerera redhiyo kwakakosha zuva nezuva-zuva, nhasi tinokuratidza a application inotibvumidza kuteerera kune chero nhepfenyuro yeredhiyo kubva kutenderera pasirese. Asi inotipawo mukana wekugona kuteerera kune edu epamoyo maPodcast, ichiva inoshamisa zvese-mu-imwe kune vashandisi vazhinji. myTuner Radio Pro, ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikopa pasina muripo.
MyTuner Radio Pro Zvimiro
Iwo akanakisa uye anoteererwa zvakanyanya kune zviteshi kubva kutenderera pasirese.
Kusvika kuzviuru makumi matatu zvezviteshi zvinowanikwa kubva kunopfuura nyika zana nemakumi maviri.
Inoenderana nezvose podcast zviripo paTunes uye mamwe masevhisi.
Tinogona kusarudza zviteshi nemazita, nyika, mhando, mukurumbira uye guta
Tinogona kugadzira yedu runyorwa rwezvatinofarira zviteshi
Teerera kuzviteshi zvemashure kumashure
Verenga nhau dzichangoburwa dzemimhanzi
myTuner Radio inoenderana neApple Watch
myTuner Radio Pro ine avhareji chiyero chenyeredzi ina kubva pa4, Inoenderana neApple Watch uye kunyangwe neApple TV, chimwe chinhu icho mashoma mashandisiro erudzi urwu anotipa. Kuti chishandiso chishande zvakanaka, myTurner Radio Pro inoda ingangoita iOS 8 kana gare gare, uye inoenderana neiyo iPhone, iPad, uye iPod Touch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » myTuner Radio Pro, teerera redhiyo ne iPhone yako, mahara kwenguva shoma
Awesome Voice Recorder Pro, iri kutengeswa kwenguva shoma